ဂေဇက်ရွာက..ကိုဗိုက်ကလေး ဘုရားကို အရက်လှူမလို့တဲ့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာက..ကိုဗိုက်ကလေး ဘုရားကို အရက်လှူမလို့တဲ့….
ဂေဇက်ရွာက..ကိုဗိုက်ကလေး ဘုရားကို အရက်လှူမလို့တဲ့….
Posted by ဇောက် ထိုး on May 19, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
“ကိုယ်ဗိုက်ကလေး..ဘုရားကို အရက်လှူချင်လို့ဆို..ဘုရားက အရက်လိုလို့ တဲ့လား”
“ဘယ်လိုသောက်နေတာကိုလဲ..လက်ထဲပါလာတဲ့ပုလင်းထဲကလက်ကျံလား ဘုန်းဘုန်းကလဲ သိရက်သားနဲ့…ဟီး တပည့်တော် အရက်ဖြတ်ချင်လို့ မသောက်တော့ပါဘူးလို့ ဘုရားကို ကတိပြုဝန်ခံမလို့ပါဘုရား”
“အော်…..ဒီလိုလား…ကိုယ်မသောက်ချင်လို့မသောက်တာကို ဘာကြောင့် ဘုရားထံ လာပြီးဝန်ခံကတိပြုနေရတာလဲ။ ဘုရားထံဝန်ခံကတိပြုထားတော့ မလွတ်မလပ်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကိုယ့်ဖာသာကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖြတ်ပါ လား”
“ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ ပြန်ပြန်သောက်နေ လို့ ဘုရားရှေ့မှာ လှူထားပြီးကတိပြုထားတော့ ကြောက်ပြီး မသောက်ဖြစ် အောင်လို့ပါဘုရား”
“ကြောက်ပြီးမသောက်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့ ခုလိုကတိပြုပြီး ပြန်သောက် ရင် ဘုရားကဘာလုပ်မှာမို့လဲ…ကတိမတည်သူဆိုပြီး ဘုရားက ဒဏ်ပေး တတ်သူလား။ ဘုရားကို သိက္ခာကျအောင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဒကာဗိုက်ရယ်။ ကမ္ဘာ့ ဘာသာတွေထဲမှာ ကျုပ်တို့ဘုရားက ဘယ်လိုသူကိုမှ သူကနေ ဒဏ် ပေး တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ သူ့ကိုကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက်..သူ့စကား နားထောင်ထောင် ..မထောင်ထောင်.. ကျုပ်တို့ဘုရားက ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှမလုပ်ဖူး။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်မှာလို့ပဲ ပြောခဲ့တာလေ…..
နောက်ကြောက်ပြီး မသောက်အောင်လို့ဆိုတော့ ဘုရားကိုကြောက်စရာကြီး လို့များမြင်နေလား ဒကာဗိုက်ရယ်။ အဲလိုမြင်တာ ကောင်းပါ့မလား။ ဒကာ ဗိုက်မူးများနေသလား…….””
“အစက မမူးပါဘူးဘု၇ား…ခုတော့ အသိမူးလာပြီထင်တယ်။ တပည့်တော် အရက်ဖြတ်ချင်ပါတယ်ဘုရား”
“ကောင်းတာပေါ့….အရက်ဖြတ်တော့ အရက်ရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက လွတ် သွား မှာပေါ့။ အရက်ဒုက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့။ အရက်ဖြတ်လို့ အရက် ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းပြီဆိုရင်…အရက်သမားသံသရာကလွတ်ပြီး နိဗ္ဗာန်တော့ ရပြီ ”
“အရက်သောက်ချင်စိတ်ကြောင့်ဆိုရင်….လူကလိုအပ်လို့သောက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်….စိတ်ကသောက်ချင်နေလို့သောက်တဲ့သဘောပဲ။ အဲဒီ သောက်ချင် စိတ်ကို နိုင်အောင်လုပ်ရမှာလဲ။ လူကလိုအပ်လို့ သောက်တာ ဆိုရင်တော့လဲ မသောက်ပဲ နေရင် ဒုက္ခရောက်သွားမှာနော်။ တချုိ့လူတွေ အရက်တွေအမြဲ သောက်နေတော့ သွေးနေရာမှာ အရက်က အစားထိုးတာ တို့. .သွေးကပြစ် နေလို့ရေသောက်လို့သွေးကမကျဲတော့တာတို့စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အရက်က နေရာ တော်တော်ယူပြီးနေပြီဆိုရင် စိတ်က ဇွတ်ဖြတ်ချင်လို့ဖြတ်လိုက်တော့ ဒုက္ခရောက်သေသွားသူတွေ မနည်းဘူး။ အဲဒါ လူခန္ဓာကိုယ်ကကို လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်လို့ပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တာ မ ဟုတ်သေးပဲ စိတ်ကသာသောက်ချင် နေသေးတာဆိုရင်တော့ အဲဒီသောက် ချင်စိတ်ကို နိုင်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကလိုနေသလား …. စိတ်ကလိုနေတာလားဆိုတာ သေချာတော့စဉ်းစားဗျ။ကိုဗိုက်ကလေး။”
“တပည့်တော်ခန္ဓာကိုက အဲဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးဘုရား။ မသောက်ရလဲ ဘာ မှမဖြစ်ပါဘူး။ သောက်ရင်တောင်မှ မနက်မနက်ခေါင်းတွေ ကိုက်ကိုက် နေပါ သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ညနေရောက်ရင်တော့လဲ အဲဒီသောက်စ ရှိနေ တော့ သောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးကပေါ်ပေါ်လာပြီး အဲဒီစိတ်ကို မနိုင်တော့ သောက်ဖြစ်သောက်ဖြစ်နေတယ် ဘုန်းဘုန်း….”
ဒါဆိုလဲ ကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့။ အဆိပ်ကိုသောက်ရင် အလူးအလဲ ခံစားရမယ်။ မနေနိုင်အောင်ခံစားရမယ်။နောက်ဆုံး သေကိုသေမယ်လို့ သိနေသူဟာ သေလဲ မသေချင်သေးတဲ့သူဟာ…အဲဒီလိုဖြစ်မယ့် အဆိပ်ကို ဘယ်လိုတိုက်တိုက် မသောက်ပါ ဘူး။ အဆိပ်သောက်လို့ဖြစ်လာမယ့်ဒုက္ခကိုသာ တကယ်မြင်ရင် ဘယ်သူမှ သောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ခုလဲဒီအတိုင်းပါပဲ….အရက်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို တကယ်မမြင်သေး မသိ သေးလို့ပါ။ အဲဒီအရက်သောက်လို့ဖြစ်လာမယ့် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသာ သိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုသိပါတယ် ဆိုရင်လဲ အဲဒီအသိဟာ တခဏလေးသိတဲ့အသိဖြစ်လို့ပဲ။ အဲဒီအသိကို များအောင်…တည်မြဲအောင်..မပွားများလို့ပဲ။ဘာဝနာ မလုပ်လို့ပဲ။
ဘုရားကတော့ ဘယ်ဒုက္ခကလွတ်ချင်လွတ်ချင် အဲဒီဒုက္ခကိုသာသိမြင် အောင်လုပ်။ ဒုက္ခကိုတကယ်သိသွားရင် သိသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ ဒုက္ခကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းကိုမလုပ်တော့ပဲ ပယ်လိုက်တာပဲတဲ့။ အဲဒီလို ဒုက္ခကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဒုက္ခကလဲချုပ်သွားတယ်။ ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ နိဗ္ဗာန်တခါထဲရတာတဲ့။
ဘုရားက သစ္စာလေးပါးမှာ ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တယ်။ ဒုက္ခတွေကချုပ် ချင်တယ်ဆိုရင်…လုပ်စရာကတစ်ခုထဲပဲ…အဲဒါက ဒုက္ခကိုသာ သိအောင် လုပ်။ ဒုက္ခကိုသာ တကယ်သိရင် အဲဒီဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ကိလေသာ ကိုပယ်ပြီးသာဖြစ်မှာပဲ။ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့ ကိလေသာတွေကိုသာပယ်လိုက် ရင် ဒုက္ခကမဖြစ်တော့ဘူး။ဒုက္ခချုပ်သွားတာ နိဗ္ဗာန်ပဲ။ သိတာရယ်။ ပယ်တာ ရယ်။ နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုက်တာရယ်ဟာ တပြိုင်နက်ထဲကိုဖြစ်ရတာတဲ့။ ဒုက္ခကို ဒီနေ့သိတာ……ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ နောက်နေ့တွေမှပယ် တာ။ ဒုက္ခချုပ်တာကတော့ နောင်မှချုပ်တာဆိုရင် ဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါး စည်းနဲ့မညီတော့ဘူး။ သစ္စာလေးပါးစည်းက သိတာရယ်။ ပယ်တာရယ်။ ဆိုက်တာရယ် ဟာ တပြိုင်နက်ဖြစ်တာပဲ။ ဒါကြောင့် အရက်သောက်ချင်စိတ် ကိုနိုင်အောင်သာလုပ်ပါ။
တင်ပါ…တပည့်တော် အိမ်ပြန်ပြီး အရက်သောက်ချင်စိတ်ကို နိုင်အောင်လုပ် လိုက် ဦးမယ်ဘုန်းဘုန်း။။
ကိုဗိုက်ကလေးအိမ်ပြန်ပြီး အရက်ဖြတ်မှားသွားပုံ..ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ ဒကာကြီးမိုးကလဲ ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေနွေးဖို့ ဆွမ်းစားဆောင်ပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်နေပါသေးသည်။ အဆင့်သင့်လျှင့်ဖြင့်…….
တဘိတော် ဗိုက်ကလေး အရက်ကို ဖြတ်လိုက်နိုင်ပါပြီဖလား..
ဖြတ်နည်းကတော့ ဘီယာနဲ့အစားထိုးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလာ့..
ခက်တာက သောက်လိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့ဘီယာက အတော်နဲ့မမူးတော့တဲ့အတွက် ဘီယာသောက်ခြင်းအမှုဟာ
ပိုက်ဆံပေးပြီး ရှူရှူးပေါက်နေရသလိုမျိုး မြင်မိပါတယ်ဖလာ့
အခုလဲ နေညိုပြီမို့ဘီယာဖိုး ဒေါ်လှ ငါးဆယ်လောက် စွန့် ပါဖလာ့
(နောက်ဒါနော် အူးဘဇင်း ဇောက်ထိုး)
ဘာပဲဖြတ်ဖြတ်၊ တစ်ကယ်ပြတ်ဖို့ ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့ တစ်ကယ့်ရင်ထဲက သိတဲ့သိစိတ် Awareness < (Credit @ Ko Thit Min )
အရက်၊ ဆေးလိပ် မကောင်းမှန်းသိပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ဆိုးကျိုးကို ခုထက်ထိ ကိုယ်တွေ့ မခံစားဖူးသေးတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီး သောက်လိုက် ၊ဖွာလိုက် ဆက်လုပ်နေမိတာပါဗျာ..
နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ မှီဝဲဖို့ မပြောနဲ့မြင်ချင်စိတ်တောင် ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး.
ရောဂါတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲက ပိုက်ဆံကုန်မယ် ဝေဒနာခံစားရမယ်..ဘာရေးညာရေးတွေ ပျက်ကွက်လာမယ်ပေါ့ဗျာ
တစ်ကယ်တော့ တန်ဆေး၊လွန်ကောင်း၊ များ ဗဲဒီးဂွတ်ဆိုသလို ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် မှီဝဲရင်တော့ ကောင်းပါတယ်..
သောက်တတ်ရင် ဆေးဖြစ်ပါတယ်..နော (အဲဒီစကားကို သဂျီးပြောခိုင်းလိုက်တာဘာ)
စဂါးမစပ်..ဗိုက်ကလေးရဲ့ အရက်ဖြတ် မှားပုံလေး ဘယ်လိုမှားမှာရဲဟင်င်…
ဒီညတော့ ဘီယာ နှစ်ဗူးလောက်တော့ သောက်ခွင့်ပေးပါဦးနော်..၂ဘူးထဲပါ..၂ဘူးထဲ
ညည်း အရက်ဖြတ်ရင် ပုလင်းလေး နာ့ဂိုပေးခဲ့
(မမှီမှာ စိုးလို့ ဇွတ်ပြေးလာရတာ မောထှာ)
နောက်၁၀နှစ်လောက်အထိ အူးဗိုက် အရက်ဖြတ်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး ။ ဒီစကားဟာ ၆၀% သေချာပါတယ် ခင်ဗျ ။ အရက်ဆိုတာ ချင့်ချိန်သောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ ရွှေရည်တစ်မျိုးလို့ ၊ အရက်သမားများ ကိုယ်စား ပြောခွင့်ပြုပါ ။
ဦးပေခင်ဗျာ…ဦးပေဟာ မိုးပြာပါလာခင်ဗျာ…သုရာမေရယ.မဇ္ဇ.ပမာဒ…ဋ္ဌာနာ..သေရည်သေရက်ကို ..မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာန..မေ့လျှော့တဲ့အထိသောက်မှ အပြစ် ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားက မိုးပြာရဲ့စကားတဲ့နော်..ဦးပေက ဘာလဲ မိုးပြာကိုထောက်ခံသလိုဖြစ်နေပါ့မယ်ဗျာ…စတာနော်..ဦးပေ..
မကြာမကြာ ရန်ဖြစ်ကြမယ် …..ဟစ်လို့ ဟစ်လို့….
ကျုပ်ဟာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါ ။
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အသေးစိတ် မပြောနိုင် မဆွေးနွေးနိုင်တာကြောင့် ရယ်မို့ 
အခုလို funny သဘောနဲ့ ကွန်မင့်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းရယ်ပါ လေ ။
ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်က.. အရက်တွေမူးနေရင်း.. ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတယောက်ရှိဖူးတယ်..(နာမယ်သိသူတွေ.. ရေးပေးပါနော)
ဘုရားဆီ လှူလိုက်တယ်တေ့ာ မဟုတ်ပါဘူး..
ကျုပ်ကို အားပေးအားမြှောက် မလုပ်စမ်းပါနဲ့မောင်ရင်ရာ
နာမည်တော့ မေ့နေတယ်။ အဲဒါ စစ်သူကြီး စစ်နိုင်လို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဘုရင်က ဘုရင်စည်းစိမ် ၃ရက်ပေးမယ် ပျော်ပါးခိုင်းထားတဲ့ ဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ၃ရက်လုံး မူးနေတာ.. ၃ရက်မြောက်နေ့ မနက်ခင်း ဆွမ်းခံကြွတဲ့ အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းတွေကို မိန့်တယ် အဲဒီ စစ်သူကြီး ကို ဖြတ်သွားရင် မြင်လိုက်လို့ ဒီည ကျောင်းကို ရောက်လာလိမ့်မယ် ပြောတဲ့ အခါ ရဟန်းတွေက မယုံတ၀က် ယုံတ၀က် ဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်။ ညနေပိုင်းလောက်မှာ အဲဒီ ကချေသည်မလေး ၃ရက်လုံး မနားတမ်း က ခိုင်းလို့ မောပန်းပြီး လဲသေလို့ မူးနေပေမဲ့ အရမ်းကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ အားကိုးရာ ဘယ်မှာ ရှိမလဲ ဆိုပြီး တွေးရင်းနဲ့ မနက်က ဘုရားကို ငါတွေ့လိုက်တာပဲ ဆိုပြီး ဘုရားကျောင်းကို တန်းပြေးသွားတယ်။ ကျောင်းရောက်တော့ တရားဟောလိုက်တဲ့ အခါ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားတယ်။
ကြောက်လန့်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဆိုတော့ အမူးပြေသလို ဖြစ်သွားမှာပါ ကျောင်းကို ပြေးတဲ့ အခါ ပိုပြီး အမူးပြေလို့ တရားဟောတာ နာကြားတဲ့ အခါမှာလည်း လုံးဝ ကြည်လင်နေပါပြီ။
စိတ်မကြည်လင်ပဲနဲ့ တရားဟောတာကို ကောင်းစွာ နာကြားနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။
ကောင်းစွာ နာကြားနိုင်ခြင်းသည် ကြည်လင်တဲ့ အသိ ရှိလို့ နာကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုက်ဗိုက် ပုံမပြောင်းသေးပါ။ အရက်မပြတ်သေးပါ။
သာဓု..သာဓု .. နှစ်ခါခေါ်ထားမယ် ။နောက်အပိုင်းကျမှခေါ်သင့် မခေါ်သင့်ဆက်စဉ်းစားတာပေါ့။
ဘုရားလက်ထက်က အရက်မူးရင်း..ရဟန္တာဖြစ်သွားတာက.. ကိုဗိုက်ကလေးလေ သူကြီးခိုင်ရဲ့…အဲ…..ဟုတ်ပေါင်…မွားလို့.. သန္တတိ အမတ်ကြီးမဟုတ်လား။ စစ်တိုက်သွားတာနိုင်လို့ ဘုရင်က စီးစိမ်တွေခံစားခိုင်း။ ပျော်ပါးသောက်စား…အဲဒီမှာ သူကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးသေတော့ စိတ်ညစ်..ပိုမူးနေ..ဒီအချိန် ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီး တရားနာလို့ တရားရသွားတယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆို အရက်မူးလဲ တရားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဦးခိုင်လေး စားတယ်ဗျာ…. အတိုင်အဖောက်ကိုညီနေတာပဲ။ ဒါမှ..ငါကွ…ဟီး.. ဟိုဒကာမ မခင်လတ်ဘယ်သွားနေလဲ မသိဘူး။ ရေခပ်ခိုင်းထားတာ..ဘုန်းကြီးကို….ဟင်း….
အရက်မူးလဲ တရားတွေ့ နိုင်သတဲ့
ဟဲ့ မိဗိုက်ရဲ့ ….. ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ အရက်သမားက နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုဒါလည်းရှိသးတယ်…။ ပေါ့သေးသေး မမှတ်နဲ့ …။ လေးကြီးကြီး…။ အဲဒါ ဘုရားရှင်ရဲ့ ယောက်ဖတော် ဆိုလားပဲဟာ………. ငါနာမယ်မေ့နေလို့…။ အဲဒေါ့ ကိုညီထွဋ် သီချင်းလား ဟိုဟာလေ……….” ဆက်သောက်………ဆက်သောက် နောက်ထပ် တစ်ခွက်လောက်….”
အမှန်ပြောတာပါ…ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရနေ့တစ်နေ့ပါ။ ဟေ့ အူးပေ.ကြားသလား. အရက်မူးလဲ တရားတွေ့နိုင်သတဲ့..ဆိုတဲ့ ဦးဗိုက်ရဲ့စာလေးတွေ့ ပြီးဖတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော် ထိမ်းကိုမရတော့ဘူး။ အတင်းရယ် မိသွားတယ်။ ရပ်လို့လဲ မရတော့ဘူး။ ဘေးကလူတွေက ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကုန်ကြတယ်။ ကြည့်လဲရပ်ကိုမရတော့ဘူး။ပြန်ဖတ်မိ..ရယ်မိဖြစ်နေလို့ ဆိုင်ပြောင်းပြီးထိုင်ယူရတယ်။ တကယ် အမှတ်တရပါ။ ဘာရယ် မဟုတ်ပေမယ့် ရင်ထဲတော့ ပျော်သွားသလိုပဲ။…..
အ၇က်ဆိုတာ စွန့်မှ ရတာပါ
မနေ့ညက Chelsea နဲ့ Bayern Munich ပွဲနဲ့ ဂျာမဏီ ကို မထင်ဘဲ ရောက်သွားလို့ပါ ရှင့်။
တီဗီကိုကြည့်မိချိန် အချိန်ပို ပထမပိုင်းမှာ Bayern Munich က တကဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာကြီး ပယ်နတီလွဲ သွား တာကို ကြည့်မိပြီး ကွင်းထဲ က ပြန်မထွက်နိုင် ဖြစ်သွားတာ။
Bayern Munich က ဖိဖိစီးစီး ကစားနေပြီး ဂိုးတွေ ကပ်ကပ်လွဲ ခဲ့တာ အတော်အားရစရာပါဘဲ။
နောက်ဆုံး ပယ်နတီသွင်းပွဲ မှာ Bayern Munich ဆရာ့ဆရာကြီး ရဲ့ တိုင်ထိဂိုး ကို ကြည့်ရတာ လှပတဲ့ ပန်းချီကား လေး တစ်ကွက်လိုပါဘဲ။
အရသာအရှိ ဆုံး ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ထီမထင် မျက်နှာပေးနဲ့ Bayern Munich ဂိုးသမား ရဲ့ ရှုံ့မဲ့မဲ့ အသွင်ပြောင်း မြင်ကွင်း ပါဘဲ။ :D
လုံးနေတဲ့ ဘော်လုံး ဆိုတာ စိတ်မမှန်ဘူး ဆိုတာ မနေ့ညက ပွဲ သက်သေပါ။
အမှန်တော့ အဲဒီ ဘော်လုံးပွဲ ကို ပြောဖို့ ထက် ဘော်လုံးပွဲ အပြီး Chelsea ကို အားပေးသူ လူကြီး တစ်ယောက် ရဲ့ အင်တာဗျူးက စကားတစ်ခွန်းပါဘဲ။
သူကပြောတယ်။ Chelsea နိုင်မှာ သူသိပြီးသား တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ “it is written” တဲ့။
အဲဒီ “it is written” စကား က slumdog millionaire ရုပ်ရှင်မှာလဲ အရေးပါတဲ့ စာတန်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သဘောက လောကမှာ ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ တွေဟာ ကြိုပြီးလုပ်ထားပြီးသားပေါ့။
အခု ဘော်လုံးပွဲကို ပြန်ဆက်ရရင် – ခြေစွမ်းမှာ Bayern Munich က အတော်သာပါတယ်။
ဘော်လုံး က သူတို့ ခြေထောက်ထဲမှာချည်းဘဲ။
Chelsea ကတော့ တစ်လှုပ်လှုပ် နဲ့ တက်လာရတာ လို့ ပြောတာဘဲ။
ဒီနှစ် အတွင်း တစ်ခြား ကစားပွဲ တွေ ရဲ့ တစ်နှစ်လုံး အမှတ်နဲ့ မှာ အဆင့်မမှီလို့ နောက်နှစ် ကို ဒီ UEFA Champions တောင် မဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်။
Bayern Munich က ပွဲပြီးကာနီး ကို တစ်ဂိုး စသွင်းပြီးသား ကို ဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရတာ။
အချိန်ပို မှာ ပယ်နတီ ရရက် နဲ့ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တာ။
အပိုင်သွင်းနိုင်တဲ့ သူရဲ့ ဂိုးလွဲခဲ့တာ။
တကယ်တော့ သူတို့ နိုင်သင့် ရက် နဲ့ Chelsea ကို ရှုံးခဲ့တာ။
Chelsea အသင်း ရှုံးလွန်းလို့ သူတို့ မန်နေဂျာ ကို ဖြုတ်ထားတာ။
အမှန်တော့ ဒီလူ့ကြည့်ရတာလဲ ထူးပြီးတော်ပုံ မရပါဘူး။
Bayern Munich က လွဲလွန်းလို့သာ နိုင်ခဲ့တာထင်တာဘဲ။
ဒီလို Chelsea နိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာ အဲဒီယာယီမန်နေဂျာ အတွက် မန်နေဂျာ ဖြစ်စေဖို့ အခွင့်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ လူတိုင်းက ထင်ကြတယ်။
အဲဒီလူ မန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ အတွက် Chelsea နိုင်ရတာလား။
ဒါဟာ မန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ ဒီအချိန်မှာ “it is written” လား။
တွေးကြည့်ရင် ဘဝ မှာ တစ်ချို့ အကွေ့တွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာနော။
ကဲ – ရှည်တွားပြီ ကိုယ်တော်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်တော့်ဟာကိုယ်တော် သာ အမူးပြေ ရှူဆေးလေး ရှူတော် မူလိုက်ပါတော့။
Post နဲ့ မဆိုင်တာ မန့်မိလို့မူးသွားခဲ့ရင်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
Post နဲ့ ဆိုင်တာ ကို ပြောရရင်တော့
ဒီအကြောင်းက ဘယ်ကလာတယ် အသေအချာမသိ။
လူတစ်ယောက်ကို အခန်းတစ်ခန်း ထဲ မှာ ထည့်ထားတယ်။
အပြင်ကို ထွက် ဖို့ တံခါး ၄ ပေါက်ရှိတယ်။
နံပါတ် (၁) တံခါးဝ မှာ ကျမ်းစာ ရှိတယ်။ အဲဒီက ထွက်ရင် ကျမ်းစာကို နင်းထွက် ရမယ်။
နံပါတ် (၂) တံခါးဝ မှာ အသား ရှိတယ်။ အဲဒီက ထွက်ရင် အဲဒီ အသားကို စားရမယ်။
နံပါတ် (၃) တံခါးဝ မှာ ညီမ ရှိတယ်။ အဲဒီက ထွက်ရင် ညီမကို စော်ကားသွားရမယ်။
နံပါတ် (၄) တံခါးဝ မှာ အရက် ရှိတယ်။ အဲဒီက ထွက်ရင် အဲဒီ အရက်ကို သောက်ရမယ်။
ဒီတော့ သူက နံပါတ် (၄) တံခါး ကို ရွေးလိုက်တယ်။
အပြစ်အကင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူးလို့ ထင်တဲ့ အရက်ကို သောက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် သူဟာ ကျမ်းစာကို နင်းခဲ့တယ်။ အသားကိုလဲ စားခဲ့တယ်။ ညီမ ကိုလဲ စော်ကားမိသွားတယ်။
ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်ပေမဲ့ လူ့ရဲ့ အသိကို မထင်ဘဲ ဖျက်တတ်တဲ့ အရည် ရဲ့ သဘော ကို ပြတာ ထင်ပါရဲ့။
(ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ ပုံပြင်အပေါ် မှာ နောက်ပြောင်ခြင်း မလုပ်စေလိုပါ)
ကြုံမှ ရော်ဘတ်တို ဒီမက်တီယို အကြောင်းရေးချင်ရဲ့..
တခါက အီတာလီယာ ဘောလုံးမှာ
ရော်ဘတ်တို ဘဂ္ဂီယို လို အလက်ဇ္ဇန်ဒျာ ဒယ်လ်ပီယာရို တို့လို
ဘောလုံးမှော်ဆြာလေးတွေ ခေတ်စားရဲ့. ….
တချိန်တည်းမှာ ဒီချယ်လ်ဆီးမှာ ပဲနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့
ဂျီအို ဖရန်ကို ဇိုလာ (မာရာဇိုလာ လို့ ခေါ်တဲ့ မာရာဒိုနာ ကို ဆက်ခံသူ ဇိုလာ ကြီး)
ခေတ်ကောင်းခဲ့ဖူးရဲ့ …နောက်ထပ် နာမည်ကျော် ၂ယောက် ကတော့
၀က်စ်ဟမ်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော် လူညစ်ကြီး ပေါ်လိုဒီကာနီယို နဲ့ ပြင်သစ် အခြေစိုက်
ဖာဘရီဇို ရာဗင်နယ်လီ ဆိုတဲ့ လူဆိုးကြီး ပေါ်ခဲ့ရဲ့ဗျာ … ဒီမက်တီယိုကတော့
ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ သူတို့အားလုံးကို မမှီခဲ့ ပြီး နောက်ပေါက်ဖြစ်လာမယ့်
ဘောလုံး ၀ိဇ္ဇာ ဖရန်ချက်စကို တော့တီ ဂိုးသွင်းစက် ခရစ်စတီယန် ဗီယာရီ နဲ့
သူ့သူငယ်ချင်း ကောက်စား ဖိလစ်ပို အင်ဇာဂီ တို့ကို လည်း မမီပြန်ဘူး…။
ခေတ် ၂ခေတ်ရဲ့ တကယ့် စူပါစတားတွေကြားမှာ မြုပ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သလို
အသက် ၂၉-၃၀ မှာ ဒဏ်ရာကြောင့် နားခဲ့ရရှာတယ်ဗျာ …
ဒါပေသိ အဲ့သည့် တရုတ်ဖုန်းဂျီး ဟာ မခေတာတော့ သေချာရဲ့…
အဲ့သည့် ဘဲတွေကြားမှာကို ရံခါ လက်ရွေးစဉ်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုး ..
သူ နားသွားတဲ့ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကနေ ၁၂နှစ်ကြာတဲ့ အခု
အချိန်ကြား သူဘာတွေလုပ် ဘယ်လိုတွေဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ
မီဒီယာတွေအတွက် တူးဖို့ဆွဖို့ လိုလာပြီ ဆိုပါတော့…
ရေမျက်နှာပြင်ပေါ် ခနပေါ်တက် ပူစီပေါင်းလား …
အသံတိတ် လုပ်ကြံတတ်သူလား ဆိုတာကတော့ …..
ကျစ်ဆံမီး လေး နဲ့ ရော်ဘတ်တို ဘဂ္ဂီယို ကလွဲရင် ကျန်သူတွေ ကို ဖွဲ နဲ့ ဆန်ကွဲ ပါအေ။ lol .. :D
ဒေါ်ခင်လတ်ရေ.. ဆူး သာဆိုရင် အသားတုံးကိုယူပြီး သွားလိုက်မယ်။
အရက်သောက်လို့ အသည်းခြောက်ပြီး အစောချင် စောလိမ့်မယ်။
အသားစားပြီး အသက်ရှင်မယ်။ သို့တည်းမဟုတ်.. အသားစားပြီးသေမယ် ဆိုရင်တောင် ဗိုက်ဆာ ပြီး မသေရဘူး။ အသည်းခြောက်တယ် ဆိုလည်း အသည်းခြောက်သေတဲ့ လူက သေခါနီးလေ တစ်ကိုယ်လုံး ရောင်ကိုင်းဖောတက်လာပြီး ဒွာရပေါက်တွေက သွေးတွေ သွန်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ရေရအုန်းမယ်။ ဝေဒနာ ခံစားမှု ကြာရှည်အုန်းမယ်။
အသားစားလို့ သေလို့ အဆိပ်တက်သေလည်း စားသေပေါ့.. ဝေဒနာ ခံစားရချိန်တိုမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ..
ဒါကြောင့်.. ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာမှားရင်.. သံသရာတခုလုံးမှောက်တယ်လို့ဆိုကြတယ်..
ဆိုတော့.. ကျမ်းစာမှာပါတဲ့အတုိင်း.. အဲဒီလူဟာ.. ဘ၀တခုလုံးလုပ်မှာပဲ..
သူဟာ.. သူယုံကြည်တဲ့..(ဒါမှမဟုတ်) မယုံကြည်တဲ့.. ကျမ်းစာကို.. နင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ရင်.. အခြေအနေတွေအကုန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်..
အခုပြောတဲ့ တခါးထွက်ပေါက်၎ခုမှာ.. အဲဒါတွေချထားတယ်ဆိုတာ.. အရက်သောက်ပြီး.. အဲဒီသောက်တဲ့သူအကုန်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ.. အဲဒီလူလိမ်ပြောတာ…
(ကျေးဇူးပြု၍ အခုပြောတာတွေအပေါ်.. အတည်မယူစေချင်ပါ…)
“”သစ္စာလေးပါးစည်းက သိတာရယ်။ ပယ်တာရယ်။ ဆိုက်တာရယ် ဟာ တပြိုင်နက်ဖြစ်တာပဲ။ ဒါကြောင့်
ps.သူကြီးပြောတော့ အတည်မယူစေချင်ပါဆို။ယူရင်နော့ ခက်ပီ။ရေးတုန်း ရေးပြီးတော့
ဥူးဗိုက်တို့များလှူစရာရှားလို့ ဘုရားကို အရက်လှူမယ်ဆိုပဲ ..ဟိဟိ နောက်ထှာနော် …
ဒီ ရုပ်ကြီးလား တကယ်ပြတ်မှာ .. သရေအရှုံးတောင်ပေးလောင်းလိုက်အုံးမယ် .. :D